Halgankii Mourinho & Parker - Jose Mourinho
Halgankii Mourinho & Parker – Jose Mourinho
Jose Mourinho ayaa sheegay in Fulham ay tahay inay raaligelin bixiso hadii ay wajahayaan Tottenham Hotspur caawa oo ay ku eedeeyaan kooxda ka dhisan Galbeedka London inay halis galineyso xilli ciyaareedka Premier League.
Hadalkii ugu horreeyay ee Martin
“Ma rabtaa in xilli ciyaareedku dhammaado mise waxaad doonaysaa?” Tababaraha Spurs ayaa si carro leh u yiri, iyadoo labada naadi midba midka kale uu eedeynayo kahor isku dhaca qasabka ah ee caawa.
Tababaraha kooxda Fulham Scott Parker ayaa sheegay in ay tahay khiyaano iyo qalad weyn mudadii yarayd ee lagu qasbay in uu ciyaaro jadwalka ciyaarta looga doonayo kooxda Tottenham.
“Aad ayaan u xanaaqsanahay, aad ayaan u jahwareersanahay,” Parker ayaa si xanaaq leh u yiri. “Waxaan u maleynayaa inay taasi dhici laheyd hadii ay ahaan laheyd ciyaar labo koox ah? Maya, uma maleynayo inay dhici laheyd. Waa cadaalad daro.”
Ciyaaryahanadda Fulham ayaa dhawaan ka soo laabtay karantiilkii waxayna sheegeen inay ciyaartooda da ‘yar u safan lahaayeen koobka FA Cup ee ay la ciyaarayaan QPR haddii ay ogaan lahaayeen inay afar maalmood ka dib la ciyaarayaan Spurs.
Mourinho ayaa yiri: “Waxaan ciyaarnay hadii aanan khaldamin 11 kulan oo ka badan inta ay ciyaartay Fulham tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka.
In kasta oo aanu tirin haddii aanu ku xisaabtamin guushii Leyton Orient ka gaadhay Korona Fayras, haddana doodda Mourinho way caddahay. Tani waa ciyaartii 30-aad ee ay Tottenham ciyaareyso 122 maalmood gudahood tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka. Fulham waxay ku jirtaa kulankeedii 20aad.
“Waxaan ciyaarnay seddex kulan usbuucii,” ayuu yiri Mourinho. Waxaan ciyaaray afar kulan hal isbuuc, waxay la ciyaareen QPR sabtidii. Waxay lahaayeen axad, isniinta iyo talaadada si ay isugu diyaariyaan kulankaan.
“Haddii ay la yimaadaan kala bar ciyaartoydooda, waxaan noqon doonaa kan ugu horreeya ee ka raalli geliya iyaga, waxaan noqon doonaa kan ugu horreeya ee dhaha waxaan u ciyaarnay faa’iido.
“Haddii ay la yimaadaan safkooda ugu adag, waa inay naga raali geliyaan dhammaanteen.”
axadle 6356 posts
The number one Caution Signal You might be Consuming Too A lot
Lionel Messi wuxuu qaataa Kaliya 200,000 usbuucii